पाकिस्तानी रेलमा आगलागी , मर्नेको संख्या ४६ पुग्यो
एजेन्सी । गुडिरहेको रेलमा आगोलाग्दा पाकिस्तानमा ४६ जना यात्रुको निधन भएको छ भने ४२ जना गम्भीर घाइते भएका छन । बिहीबार बिहान पाकिस्तानको राजधानी कराँचीबाट रावलपिंडीतर्फ गइरहेको तेजगाम एक्स्प्रेसको रेल...
भारत प्रशासित कश्मीरमा गोली हानी मजदुरको हत्या
एजेन्सी । भारत प्रशासित क्षेत्र कश्मीरमा गोली प्रहार गरि पाँच मजदुरको हत्या गरिएको छ । कश्मीरको कुलगाम जिल्लास्थित कातरसु गाउँमा गोली हानेर पाँच जनाको हत्या गरिएको हो । गोली प्रहारबाट एक जना गम्भीर घा...
एजेन्सी । ब्रिटेनमा सन १९२३ पछि पहिलो पटक डिसेम्बर महिनामा आम निर्वाचन हुँदैछ । ब्रिटिश संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले समय अगावै आमनिर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको प्रस्तावलाई बहुमतले ...
एजेन्सी । ब्रिटेनको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले समय अगावै आमनिर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले डिसेम्बर १२ तारिखमा आमनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरेका...
एजेन्सी ।राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले तथाकथित इस्लामिक स्टेट समूहका नेता अबु बकर अल:बग्दादी अमेरिकी फौजद्वारा सिरियामा मारिएको घोषणा गरेका छन्। ह्वाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले भागेर एउटा सुरुङभित्र अल:बग...
एजेन्सी । अमेरिकाले आइएसआइएस विद्रोही नेता अबु बक्र अल-बग्दादी आफ्नो सुरक्षा कार्बाहीमा मारेको दाबी गरेको छ । पहिचान नखुलाइएका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले शनिवार सिरियाको उत्...
फलफूल उपहार दिएका कारण जापानी मन्त्रीको राजिनामा
एजेन्सी । जापानका नवनियुक्त व्यापारमन्त्रीमाथि इसु सुगावाराले कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका छन्। सुगावाराले टोकियोका आफ्ना मतदाताहरूलाई महँगो फलफूल र गँगटो उपहार दिएको साप्ताहिक पत्र...
एजेन्सी । यूकेको एसिक्समा एउटा लरी कन्टेनरभित्र फेला परेका ३९ वटा शव चिनियाँहरूको भएको खुलेको छ । पूर्वी ग्रेजस्थित वाटरग्लेड औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीय समयानुसार बुधवार १:४० बजेतिर त्यहाँ शव भएको सू...
बाकु पुगे प्रधानमन्त्री, शिखर सम्मेलन आजबाट शुरु हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंलग्न आन्दोलनको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बिहीबार अजरबैजानको बाकु पुगेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएअनुसार उनलाई विमानस्थलमा अजरबैजानका उपप्रधानमन्त्...
एजेन्सी । लगभग चार दशकसम्म फरार रहेका ८६ वर्षीय वाल्टर जेम्स मेसन पक्राउ परेका छन् ! उनी १० वर्ष पुरानो हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको शंका सँगै पक्राउ परेका वीवीसीले उल्लेख गरेको छ । मध्य टेक्सासका अधि...
रुस र टर्कीबीच ऐतिहासिक सहमति, कुर्दमाथि थप संकट !
एजेन्सी । टर्की र रुसबीच लामो बैठकपछि उत्तरी सिरियामा कुर्द लडाकूविरुद्धको सैनिक कारबाहीलाई लिएर नयाँ सहमति बनेको छ । दुवै देशले यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पु...